ग्लोबल वार्मिङका कारण महासागरमा नकारात्मक असर — Sanchar Kendra
१लेस्टर सिटीले जित्यो एफए कप फुटबलको उपाधि, चेल्सी पराजित
२सकियो ओली-नेपालबिचको ‘वान टु’ वार्ता, के भयो सहमति ?
३कोरोनाबिरु’द्ध ल’ड्न सीसीएमसी बैठकले के गर्यो निर्णय
४यस्ताे छ इजरेल-प्यालेस्टाइनबीच तनाव भइरहनुकाे मुख्य कारण र १०० वर्ष पुरानो छ मुद्दा
५सिंहदरबारमा ओली र नेपालबीच ‘वान टु वान’ वार्ता सुरु, यी बिषयमा हुदैछ छलफल
६कहिलेदेखि सुरु हुदैछ नयाँ शैक्षिकसत्र ? शिक्षा मन्त्रालयले दियो यस्तो जानकारी
७बाबुराम भट्टराईको यस्तो खुलासाले ओली तनावमा
८निषेधाज्ञाका बेला काठमाडौंमा यस्ताे काण्ड मच्चाउने ५ जना पक्राउ, को हुन् उनीहरु ?
९इजरायल र प्यालेस्टाइनबीच यु’द्ध झनै चर्किएपछि अमेरिकी राष्ट्रपति बाईडेन चाले यस्तो कदम
१०चिनियाँ अनुदानको स्वास्थ्य सामग्री बोकेका गाडी तातोपानी नाकातर्फ प्रस्थान, के-के आउदैछ ?
११काठमाडौंमा कहाँ-कहाँ लगाइँदैछ चिनियाँ खोपको दोस्रो डोज, हेर्नुहोस सूचीसहित
१२यी हुन् कोरोना संक्रमित र मृत्यु भएकाहरुका आफन्तसँग चर्को शुल्क असुल्ने एम्बुलेन्स चालक, परे प्रहरी फन्दामा
ग्लोबल वार्मिङका कारण महासागरमा नकारात्मक असर
महासागरको सन्धिक्षेत्र (Twilight Zone) २ सयदेखि १ हजार मिटरमा हुनेगर्छ । धेरै गहिरो भएका कारण यहाँको पानीमा कम मात्र सूर्यको प्रकाश पुग्नेगर्छ । यसकारण नै यसलाई सन्धिक्षेत्र भनिएको हो । हालै गरिएको एक अनुसन्धानले के देखाएको छ भने ग्लोबल वार्मिङका कारणले महासागरको यस सन्धिक्षेत्रलाई नराम्रो असर पुर्‍याएको छ ।
समुद्रको गहिराइमा बस्ने जीवको पोषण हासिल गर्ने तरिका अलगै हुन्छ । उनीहरुले यो पोषण समुद्रमा हुने बरफको माध्यमबाट प्राप्त गर्ने गर्छन् । जो हावाको माध्यम भएर समुद्रको गहिराइमा पुग्ने गर्छ । कार्डिफ युनिभर्सिटीले गरेको यस विषयक अनुसन्धानमा समुद्रको जीवनको विकासका लागि समुद्री बरफको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुने पत्तालगाएका छन् ।
अध्ययनका क्रममा अनुसन्धाताले के पाए भने उद्भव प्रक्रियामा जीवहरु समुद्रको गहिराइमा जाने गर्छन् । गहिराइमा भएको चिसो पानीले समुद्री बरफलाई लामो समयसम्म सुरक्षित राख्ने काम गर्छ, जसले गर्दा गहिरो पानीमा लामो समयसम्म भोजन सुरक्षित हुने गर्छ ।
ग्लोबल वार्मिङले समुद्रको यो चक्रमा बाधा पुर्‍याउने देखिन्छ । यसले गर्दा तापक्रम बढेर खाद्य सङ्कट तथा पोषण आपूर्तिमा प्रभाव पर्ने देखिन्छ । समुद्री जीवनले महासागरको साथसाथै हाम्रो ग्रहको जीवन स्वस्थ राख्नका लागि पनि ठूलो भूमिका खेलेको हुन्छ ।
समुद्रको यो स्थान रहस्यले भरिएका जीवहरुको बासस्थान पनि हो । यसमा प्लेक्टोनदेखि लिएर जेलिफिससम्म पर्छन् । कार्डिफ युनिभर्सिटीका अनुसार यो जैविक विविधता तथा बायोमासमा रहेको रहस्यमय खजाना हो । साथै यो महासागरको अन्य भागका जीवनका लागि पनि महत्त्वपूर्ण हुन्छ ।
समुद्रको पिँधको माटोमा भेटिएका साना जीवाश्मको अध्ययनबाट यो कुरा पत्ता लागेको हो । यस बारेमा अध्ययन गर्ने एक लेखक तथा जीवाश्म वैज्ञानिक डा. बोसोकालो गालाजोका अनुसार अध्ययनका क्रममा गएको डेढ करोड वर्षमा केही प्रजातिहरु विस्तारै विस्तारै तल्लो तहमा विस्थापित भएर गए ।
शोधकर्तालाई यो विषय रहस्यमयी लाग्यो । उनीहरुका अनुसार यो सबै रहस्य भनेको पानीको तापक्रम नै हो । तर उनीहरुका अनुसार हाल महासागरको पानीको तल्लो भागको तापक्रम धेरै नै वृद्धि भएको पाइयो । यो रेफ्रिजेरेसनको प्रभावका कारण समुद्री बरफ लामो समयसम्म सुरक्षित रहिरह्यो ।
यसले गहिराइमा बस्ने जीवलाई भोजन पनि प्रदान गर्दै रह्यो । यसले गर्दा सामुद्रिक गहिराइमा जैविक विविधता टिकिरहन मद्दत गर्‍यो । तर ग्लोबल वार्मिङले महासागर पनि अछुतो रहन सकेन । यो हाम्रो ग्रहको भविष्यको चिन्ताको विषय भएको छ । यसले सम्पूर्ण ग्रहको परिस्थिति बारेमा प्रभाव पार्न सक्छ ।
कपडाभित्रको दृश्य समेत खिच्ने क्यामरा राखेपछि यो फोनको फिचरमै प्रतिबन्ध
वैज्ञानिकले भ्यागुतोबाट बनाए नयाँ रोबोट
सामसुङले ल्यायो यस्तो एप, जसले आइफोनलाई ग्यालेक्सीमा परिवर्तन गरिदिन्छ
नेपाल टेलिकमले सञ्चालनमा ल्‍यायो ‘एनटी च्याटबोट’, यी सेवाहरुबारे जानकारी पाउन सकिने
५ सय १२ स्थानीय निकायमा इन्टरनेट जडान